वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितले बच्चा जन्माइन् – Enepali News
August 1, 2020 109
वीरगञ्ज, १६ साउन । नारायणी अस्पतालको गण्डक अस्थायी को भिड हस्पिटलमा उपचाररत को रोना सं क्रमित गर्भवतीले छोरीलाई जन्म दिएकी छन् ।अस्पतालका इन्चार्ज डा. नीरजकुमार सिंहका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिका–१ छप्कैयानिवासी ३१ वर्षीया महिलाले शुक्रबार बिहान ४ बजेर १० मिनेटमा छोरी जन्माएकी हुन् ।
आमा र छोरी दुवैको स्वास्थ्य सामान्य रहेको डा. सिंहले जानकारी दिनुभयाे । ‘आमा र नवजात शिशु दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ,’ डा. सिंहले भन्नुभयाे, ‘संक्रमित महिलाले ३ केजी तौल भएकी छोरीलाई जन्म दिएकी छन् ।’
सिंहका अनुसार को रोना पो जेटिभ देखिएपछि महिलालाई बिहिबारदेखि नै गण्डक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । नेसनल मेडिकल कलेज उपचार गराउन पुगेकी उक्त महिलामा को रोना स ङ्क्रमण भेटिएपछि उनलाई गण्डक ल्याइएको थियो ।
‘को रोनाको शं का लागेर बिहीबार मेडिकल कलेजले को रोना अस्पताल पठायो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘बिहीबार राति नै गर्भवती महिलाको पीसीआर रिपोर्टमा को रोना पोजेटिभ आएको थियो ।’
Prevविश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा, पुल पार गर्नेको भीड
Next‘काठमाण्डौमा जुनसुकै बेला लकडाउन हुन सक्छ’